Indlu ethule, eziphekelayo, enezinja e-Louth - I-Airbnb
Indlu ethule, eziphekelayo, enezinja e-Louth
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Tim And Vicky
U-Tim And Vicky Ungumbungazi ovelele
Siyakwamukela ku-Linden View, ikhaya lamaholide elinokuthula elilungele izinja, eliziphekelayo e-Louth. Indlu enamagumbi amabili okulala ihlala emgwaqeni othule, ongadluleli obhekene namathuna anokubukwa okubheke emaphandleni, kodwa futhi nokuhamba imizuzu eyishumi ukuya edolobheni lomlando laseLouth. Uma ufuna indawo yokuziphekela wena emaphandleni emnyango wakho kodwa futhi eduze nezitolo, izindawo zokudlela kanye nezindawo zokudlela - lokhu kungaba okwakho. Ngo-2021 indlu inekhishi elisha nendawo yokugezela efakiwe futhi ine-Wi-fi yamahhala.
ILinden View iyindlu ephakathi nendawo emugqeni wezakhiwo ezintathu emgwaqeni othule, ongadluli nohambo lwemizuzu eyishumi ukuya enkabeni yedolobha laseLouth.
Indlu ebheke emathuneni, ithola ilanga lasekuseni ngemuva kanye nokushona kwelanga ngaphambili. Ngaphandle kwezakhiwo ezibheke phambili, kukhona ukubukwa okubheke emaphandleni ukusuka ngaphambili kwendlu.
ILinden View ihlalisa abantu abane emakamelweni okulala amabili. Zinombhede ophindwe kabili kanye nemibhede emibili eyodwa. Igumbi lokulala elikhulu line-TV. Igumbi lokugezela eliphezulu linebhavu elineshawa ngaphezulu. Phansi kukhona ikhishi/indawo yokudlela enetafula nezihlalo zabantu abane kanye nendlu yokuphumula. Ngaphandle kunengadi encane engemuva enesethi yokudlela yangaphandle kanye nebhentshi. Indawo yokupaka isemgwaqweni ngaphandle kwendlu. Kunengadi encane engaphambili.
Isilinganiso sezinja ezimbili zamukelekile endlini yonke nasezingadini. Sicela izivakashi zingashiyi izinja zingagadiwe endlini noma ezingadini. Kungabongwa uma izinja zigcinwe kosofa nemibhede.
Kukhona ukushisisa okuphakathi kwegesi namanzi ashisayo asheshayo. Ikhishi lisha ngo-2021, line-hob eyakhelwe ngaphakathi kanye nohhavini, umshini wokuwasha izitsha kanye nesiqandisi esigcwele usayizi. Ekamelweni lokuphumula kukhona i-TV ne-DVD player, neqoqo lezincwadi nama-DVD.
Indlu yokugezela nayo yashintshwa ngo-2021, yaba neshawa phezu kokugeza okumise okwe-L.
Ingadi engemuva ibekwe utshani kodwa inendawo encane, eseceleni ye-patio - ilungele ukuhlala ngaphandle kusihlwa okufudumele.
4.96 · 90 okushiwo abanye
Ngenkathi indawo ithule futhi ifihlwe kude, iLinden View inenzuzo yokuba uhambo lwemizuzu eyishumi ungene eLouth. Lapho uzothola izitolo ezizimele ezihlukile edolobheni, amanye amaketanga kazwelonke kanye nezindawo eziningi zokudlela nokuphuza.
Indawo yaseLincolnshire Wolds Yobuhle Bemvelo Okuvelele isemnyango wakho, ulwandle luyimizuzu engama-20 futhi idolobha elinomlando laseLincoln liyimizuzu engama-45 nje ngomgwaqo. Kukhona futhi umjaho wezimoto eCadwell Park, imizuzu eyi-15 ukusuka eLouth kanye nomjaho wamahhashi eMarket Rasen, imizuzu engama-20 phansi komgwaqo.
Abahamba ngezinja nama-rambler banakekelwe kahle - ungajoyina izindlela zezinyawo zomphakathi ukusuka emnyango okuzokuyisa enhliziyweni yezwe. Ngokuqhubekayo, ungahamba ogwini olungangcolisiwe ezindundumeni nasemabhishi angenamuntu. Kunokuhamba okuningi okuhle e-Wolds, okulungele konke ukunambitheka - ungaphinda uhambe ingxenye ye-Viking Way, esukela osebeni loMfula i-Humber wehle uye e-Rutland Water.
Isiteshi sesitimela esiseduze esiya eLouth siseMarket Rasen noma eGrimsby futhi kukhona izinsiza zamabhasi phakathi kwamadolobha namadolobhana.
ILouth yaqanjwa ngokuthi yiDolobha Eliyintandokazi YaseBrithani ngomagazini i-Countryfile ngo-2012, elichazwa ngokuthi 'ipharadesi lokudla', linamabhusha amaningana, isitolo sikashizi, izibiliboco, ababhaki, amakhefi, izindawo zokudlela, izindawo zokudlela kanye nezitolo ezizimele (kufaka phakathi isitolo esincane somnyango. ) okwenza ihluke ngempela. Kunemakethe kathathu ngeviki (ematasa kakhulu esifundeni), imakethe yabalimi kanye ngenyanga kanye nemakethe ye-Food Friday njalo emavikini amane.
Idolobhana futhi linesinema enezikrini ezintathu, isikhungo sokungcebeleka kanye nenkundla yegalofu. Izikhala ezivulekile zeWestgate Fields kanye neHubbards Hills zihamba imizuzu embalwa nje ukusuka enkabeni yedolobha. Okubusa esibhakabhakeni iSt James Church, enesonto eliphakeme kunawo wonke lesonto lenkathi ephakathi eNgilandi. Ivulekele izivakashi futhi inesitolo sekhofi.
Ibungazwe ngu-Tim And Vicky
Ababungazi bakho bahlala eduze kwekhona ngakho bazotholakala (ngaphandle kwalapho kushiwo ngenye indlela) uma unezinkinga noma ungathanda iseluleko mayelana nendawo.
UTim And Vicky Ungumbungazi ovelele